Nrụpụta na nrụpụta akpa akpa China | Ceres
CPT nwere ike inye akpa akwa akwa-akwa akwa nke nwere akwa mkpuchi na nchekwa ọka.N'ikpeazụ, akpa CPT na-enye ụzọ dị mfe, nchekwa na akụ na ụba maka ịchekwa nri, ọka, ọka, fatịlaịza na ngwaahịa ndị ọzọ, na-enye ohere ezigbo ọnọdụ gbaa ụka na ichekwa uru nri ha.
CPT nwere ike ịnye akpa igwe nwere ọtụtụ akwa oyi akwa nke ejiri mechie ọnụ na ịchekwa ọka. N'ozuzu, akpa CPT na-enye ụzọ dị mfe, nchekwa na akụ na ụba maka ịchekwa nri, ọka, ọka, fatịlaịza na ngwaahịa ndị ọzọ, na-enye ohere ezigbo ọnọdụ gbaa ụka na ichekwa uru nri ha.
Ime silage bụ nka na sayensị. Oxygen (ikuku) bụ onye iro nke usoro ịgba ụka. Fermentation a na -enweta na gburugburu ikuku na -eduga n'ịgbanwe 100% nke shuga ka ọ bụrụ lactic acid nke na -arụ ọrụ dị ka onye na -echebe ihe na ebu. Ịkpa akpa na-arụpụtakwa silage nke dị mma nke na-eguzogide ebu ma anaghị ajụ oyi. Akpa Silage bụ naanị sistemụ na -emechi silage kpamkpam, na -echekwa ihe kpọrọ nkụ ma na -ebelata mfu ike, na -ebute ndepụta nri kacha mma.
Usoro nchekwa nchekwa silage nke gara aga siri ezigbo ike ijikwa na anaghị emepụta ọnọdụ achọrọ maka ịgba ụka nke ọma. Edeela mfu nke usoro ndị a tara ahụhụ ọtụtụ iri afọ nke nyocha Mahadum. Ọnwụ ndị a na -agba site na 20% ruo ihe ruru 40%.
Uru akpa akpa:
Akpa Silage na -enye uru ndị a:
Ọnwụ nchekwa dị ala n'ihi mmebi.
Etinye obere ego itinye ego na mbụ.
Ọnụ ego a na -akwụ kwa afọ.
Ike nchekwa na -akparaghị ókè
Ọtụtụ n'ime ego a na -etinye na igwe; ọbụghị na ụlọ nke siri ike ịre ma ọ bụrụ na atụmatụ gbanwere.
Ọkwa mma dị elu.
Njikwa ka mma nke ụdị silage na ọnọdụ.
Na -ebelata ihe ize ndụ ọrụ.
7'x100 ′, 150 ′, 200 ′, 250 ′, na 300 ′
8'x100 ′, 150 ′, 200 ′, 250 ′, na 300 ′
10'x150 ′, 200 ′, 250 ′, na 300 ′
11'x250 ′, 300 ′, na 500 ′
12'x200 ′, 250 ′, 300 ′, na 500 ′
14'x300 ′ na 500 ′
Enwere ike ị nweta nha ọzọ ma rịọ.
Nke gara aga: Akpa ọka
Tinye akpa akpa ọ bụla
Akpa Silage Plastic
Akwụ ụgwọ akpa
Akpa mbukota Silage
Akpa akpa rọba
Akpa nchekwa Silage
Akpa North Silage
Igwe ihe onyonyo enyo enyo mebere PET
Copyright - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Ngwaahịa apụta, Map saịtị, Profaịlụ mkpọchi ihe nkiri Poly Greenhouse, Profaịlụ mkpọchi griin haus, Profaịlụ na Zigzag Spring Waya, Spring Waya N'ihi Ịkpọchi Film, Mkpọchi mkpọchi ihe nkiri Greenhouse, Ihe nkiri Bale Kechie Maka Ọrịre, Ngwaahịa niile